मानवताको सुन्दर आधाको लागि लगभग हरेक वरदानको एक पारंपरिक अतिरिक्त फूलहरू हुन्। हर महिला जस्तै नाजुक, कमजोर, अपरपराउनुभएन, उनीहरु खुशी भए, कृपया ध्यान राख्नुहोस् र ध्यान आकर्षित गर्नुहोस्। जब सुन्दर गुलदस्ता अर्को दिन फर्काउँछ, त्यो मात्र धेरै खेद छ, यसको आकर्षण गुमाउँछ।
कुनै कुरामा परिष्कृत फ्लोरिस्टहरू, तर सबैभन्दा उत्तम गुच्छाले पनि आफ्नो हप्ताको एक हप्ताको लागि कृपया खुसी पार्छ। यही कारणले उनीहरूले फूलहरू जीवन बिताउने एक विकल्प खोज्न थाले, उनीहरूलाई विभिन्न सामग्रीबाट बनाइदिए। कागज फूल, उपकरण, कढाई - उपहार को रूप मा हस्तशिल्प को सबै भन्दा सामान्य प्रकार। तर मूल को नजिक को मोती को फूलहरु थिए। प्रयोग गरिएको सामाग्रीको आकारको कारण, बुनाईको विभिन्न तरिकाहरू, उत्पादनहरू यथार्थवादी हुन् कि कहिलेकाहीँ उनीहरूलाई वास्तविक फूलबाट अलग गर्न गाह्रो हुन्छ।
मनसायको मालिकले धेरै प्रविधिहरू विकास गरे, मोतीबाट रंगका विभिन्न योजनाहरू आविष्कार गरे । यी घटनाहरूको गुलाब धेरै सामान्य छ। कुन कुनै आश्चर्य छ, किनकि उनीहरूले मान्य रूपमा फूलहरूको रानी मानिन्छ।
कामको लागि सामग्री
मोतीबाट गुलाब सिर्जना गर्न के चाहिन्छ ? बुवा योजनाहरू, मोतीहरू (कम्तीमा दुई रङहरू, तर यो सम्भव छ) र तारको लागि, क्यान्सर वा हिसाबले तार। यस्तो सरल सेटले वास्तविक मनपर्ने चमत्कार सिर्जना गर्न मद्दत गर्नेछ, जुन उत्तम वरदान हुन निश्चित छ र धेरै लामो मालिकको कृति पाउनेछ।
मनका सेटको सुविधाको लागि, तपाईं सानो, उजुरी क्षमता प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। यो सामग्री को अनाज डाल्न, यो स्पिलिङबाट रोक्न सजिलो छ। सामान्यतया, सुसमाचारको कार्य क्षेत्र राम्रो तरिकाले ज्योति, स्थिर र कामको लागि सहज हुनुपर्छ।
यदि तपाइँ विशेष मनपराउने पुस्तिकामा प्रस्तुत मास्टर क्लासहरू सावधानीपूर्वक अध्ययन गर्नुहुन्छ भने, यो गुलाब सिर्जना गर्ने धेरै तरिकाहरू छन् भनेर स्पष्ट हुन्छ। यदि तपाईं आफ्नो डिकोडिङमा सावधानीपूर्वक काम गर्नुहुन्छ भने मोतीको योजना, अझ पनि परिष्कृत, कुनैपनि अवस्थामा बुझ्न सकिन्छ।
त्यसैले, एक गुलाबी बुन बुनाई को समानांतर योजना हो, यसका लागि मास्टर वर्ग तल प्रस्तुत गरिनेछ (शुरुवातका लागि यो सबै भन्दा धेरै सरल छ)। यस प्रविधि यस क्षेत्रमा प्राथमिक ज्ञानमा आधारित छ, त्यसैले उत्पादनमा काम धेरै समय र प्रयास लाग्दैन।
मोतीबाट गुलाबको फूलको दोस्रो योजना फ्रान्सेली प्रविधिमा आधारित छ। यो पनि परिपत्र भनिन्छ। यो प्रविधि एकदम बढि जटिल छ, किनकि पहिलो शुरुवात सुलमान पहिलो पटक फूल भागहरू कसरी सिर्जना गर्ने भन्ने थाहा पाउनेछ। तर धेरै प्रयासहरूको परिणामस्वरूप, तपाईं अझै भविष्यको लागि स्टक पाउनुहुनेछ, जुन, निस्सन्देही, अघिल्लो एक भन्दा बढी सुन्दर हुनेछ।
त्यहाँ प्रविधिहरू छन् जुन फ्रांसीसी बुवासँग धेरैजसो हुन्छन्, तर तिनीहरू सबैलाई विस्तृत अध्ययन र विचार चाहिन्छ।
गुलाबको निर्माणमा काम सुरू गर्न (मोतीको योजना माथि उपस्थित गरिएको छ), सामग्री तयार हुनुपर्छ। सबै चीजहरू हातमा थिए सुनिश्चित गर्न, काम रोक्न सकेन र कुरै भएन, स्थिर सतहमा तुरुन्तै काम सुरु गर्न राम्रो छ।
एक गुलाब को पंख को लागि यो तार को 70-80 सेन्टिमिटर लंबा को लागी आवश्यक छ (पंखुले सानो देखि पछि)। तारको मध्यमा 1 मोती। अर्को,2मोडाहरू डायल गर्नुहोस् र तारको2पङ्क्तिमार्फत पार गर्नुहोस्, पहिलो तान्नुहोस्। हामी जुन सुरुमा छौँ।
यस चरण पछि, हरेक पङ्क्ति मोतीको संख्यामा वृद्धि आवश्यक छ (4, 6, 8, 10, आदि)। त्यसैले अन्तिम9मोतीहरू टाइप गर्नाले9पङ्क्तिहरू प्रदर्शन गर्न आवश्यक छ। त्यस पछि, तार को प्रत्येक अन्त मा तपाईंलाई 9-11 मोती डायल गर्न को लागी र उनलाई पहिले को माध्यम ले खिंचाव को आवश्यकता हो। त्यसपछि तारको अन्त दृढतापूर्वक मोडिन्छ। यो यो जस्तो देखिन्छ:
अन्त्यमा, हामीसँग तयार पेन्टलल छ। एक सानो आकारको गुलाबको लागि, यस योजनाको अनुसार लगभग4प्यानलहरू चाहिन्छ,5प्यानलहरू जुन 1 पङ्क्ति ठूलो हो (जुन, अन्तिम पङ्क्ति 18 मोतीको साथ समाप्त हुन्छ)। तपाईं उत्पादन प्राप्त गर्न चाहनु भएको छ, तपाईलाई बुनाई चाहिने ठूला ठूला लोबहरू।
यस तरिकाबाट, हामीले सानो फूलको कल्याणलाई बुवा सिफारिस गर्छौं, जसबाट बास्केटहरू वा सानो गुच्छा पूर्णरूपमा बनाइनेछ।
पातहरू सिर्जना गर्दै
समानांतर बुनाईको प्रविधि पनि गुलाबको पातहरू सिर्जना गर्दछ, मोतीको एक ढाँचा जुन अब मानिन्छ। यो गर्न को लागी, तपाईंलाई प्रत्येक पङ्क्तिमा 8 क्रमहरु, क्रमशः क्रमशः 1, 3, 4, 5, 4, 3,2र 1 मोतीहरूको संख्या बनाउन आवश्यक छ। यस योजना अन्तर्गत, बाख्राहरू बुना हुन्छन्, जुन सिधै प्यानलहरू भित्र संलग्न हुन्छन्। कूलको आकारमा आधारित, सीपलहरूको संख्या3वा बढीभन्दा भिन्न हुन्छ।
गुलाबका पित्तहरू फरक देखि फरक हुन्छन्। यी भागहरु को मोती को पैटर्न बुनाई विधि को समान छ, पाना 11 पङ्क्तिहरु हो। तल पङ्क्तिहरूमा मोतीहरूको संख्यामा वृद्धि देखाउने चित्रण: 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 8, 7, 5, 3।
उत्पादन को अनुसार
त्यसोभए, सबै भागहरू तयार छन्, तपाईं मोतीबाट गुलाबहरू संयोजन गर्न सक्नुहुन्छ। योजनाहरू, जस्तै चरण-दर-चरण तस्बिरहरूबाट देखाइएका, धेरै सरल छन् र शुरुआतीका लागि पहुँच योग्य छन्।
कल्याण केन्द्रको लागि, यो दुई साना प्यानलहरू लिन आवश्यक छ र ती सर्कुलर लगाइएको कलम प्रयोग गरेर लगभग आधे मा झुन्ड्याउन आवश्यक छ। त्यसपछि तपाइँ तिनीहरूलाई एकअर्कामा घुसाउन आवश्यक छ।
त्यस पछि, अन्य सबै पंखुलाहरू मुख्य स्टेमसँग जोडिनैपर्छ, ताकि कलम बाहिर जान्छ। अन्तिम पंखुला, यदि साइजलाई अनुमति दिईन्छ, राम्रो तरिकाले झुकाउन सकिन्छ।
गुलाबडुडमा, तुरुन्तै सीपलहरू संलग्न गर्दछ, समान रूपमा तल तिनीहरूलाई वितरण गर्दछ। त्यस पछि, स्ट्याकमा सानो तल्लो संलग्न पत्तिहरू छन्। त्यसपछि उत्पादन हरी रंगका थ्रेडहरू (उदाहरणका लागि, mulina) वा पुष्प पेपरको साथ लिपि गर्न सकिन्छ। सबै कुरा, एक गुलाबी मोती, जो हामी द्वारा बुनाई को बुनाई पैटर्न तैयार छ, तयार छ।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, मोतीबाट फूलहरू सिर्जना - व्यवसाय सरल र धेरै आकर्षक छ। यसबाहेक, हस्तनिर्मित उत्पादनहरू धेरै बहुमूल्य छन्, किनभने पेस्टस्किङ कार्यबाट अलग हुन्छ उनीहरूलाई समय, आत्मा र प्रेरणाको साथ प्रयोग गरिन्छ। सानो प्रयासहरू र उल्लेखनीय खर्चहरूको लागि धन्यवाद, मोतीबाट एक सुन्दर जन्मेको हुन सक्छ। बुनाईको योजनाहरू, तपाईंले पहिले नै देख्नु भएको छ, पढ्नको लागी पुरा तरिकाले असंबद्ध र पहुँच योग्य छ। खैर, नतिजाको रूपमा, तपाइँ निश्चित हुन सक्नुहुनेछ कि तपाइँको वरदान सबैभन्दा अप्रत्याशित, रोचक र अद्वितीय हुनेछ।
समाचार पत्रको ट्यूबबाट शिल्प आफै: एक क्रिसमस रूख, एक मुर्गा, एक तारा, कास्केट
पशु centenarians: दुनिया मा एक धेरै लामो-बस्ने पशु?
सौर shingles। लक्षण। उपचार
एक मिठाई दाँत कल कसरी? एक बौना मीठो दाँत कसरी उत्पादन गर्न?
विरोधी-कम्पन को लुगा धुने मेसिन लागि समर्थन गर्दछ। रबर एक लुगा धुने मेसिन लागि खडा छ
सखलिन भूकम्प: विनाशको मात्रा
रोटी Bork X500: ग्राहक समीक्षा
काम को वचनहरू के हुन्?